NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် Verizon က Smartplay IBC 2019 မှာပွဲဦးထွက် Upgrade
Home » အသားပေး » Verizon က Smartplay IBC 2019 မှာပွဲဦးထွက် Upgrade
Verizon က Smartplay IBC 2019 မှာပွဲဦးထွက် Upgrade
နှင့် IBC 2019 အဆုံးသတ်တော်မူပြီးမှ, က conference မှာပြသခဲ့ကြသည်သောများစွာသောစိတ်ကူးနှင့်ဆန်းသစ်သောမီဒီယာပလက်ဖောင်းမှရှာဖွေနေအတွက်မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ အထူးသထွက်ရပ်တစ်ခုမှာ၏ခဲ့သည် Verizon ကမီဒီယာ။ IBC 2019 မှာ, Verizon ကမီဒီယာပွဲထွက်ခဲ့ပြီး Verizon က Smartplay၎င်း၏မီဒီယာပလက်ဖောင်းများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်။
Verizon က Smartplay ဆိုတာဘာလဲ
Verizon က Smartplayလည်း Stream လမ်းကြောင်းအဖြစ်လူသိများ, မြန် startup ကြိမ်နှင့် rebuffering လျှော့ချရေးဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့မျိုးစုံအကြောင်းအရာပေးပို့ကွန်ရက်များ (CDNs), ကိုကျော်ကဗီဒီယိုအသွားအလာကယ်တင်တတ်၏တဲ့ Verizon ကမီဒီယာပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Verizon က Smartplay သည် dynamically အသွားအလာကယ်နှုတ်တော်မူရန်၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်နှင့် device ကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းမှ Verizon ကမီဒီယာရဲ့ server ကို client-side စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာအသုံးပြုသည်။ ဤသည်ပြတ်တောက်ကြုံနေရကွန်ရက်များပါဝင်သောအခြေအနေတွေအတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ယာဉ်အသွားအလာ re-ရှုံးသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, ထုတ်လွှင့်မည်သည့်အလားအလာထိခိုက်ကွန်ယက်ကိုပြဿနာများကိုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။
Verizon က Smartplay သာ. ကောင်း၏အရည်အသွေးအကြောင်းအရာဘဝမှကယျတငျဘယ်လို
Verizon က Smartplay ရဲ့အကျိုးအမြတ်အများအပြားပါဝင်သည်:
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကုန်ပစ္စည်းအရာရှိ, Verizon ကမီဒီယာမှာမီဒီယာပလက်ဖောင်း
အသေးစိတ် Verizon က Smartplay များ၏အရည်အသွေးများကိုဆွေးနွေးခြင်းများတွင် Verizon ကမီဒီယာအကြီးအကဲထုတ်ကုန်အရာရှိ, Ariff Sidi ဒီပြောတာပေါ့, "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Smartplay ဖြေရှင်းချက်ကိုဘယ်လိုလမ်းကြောင်းအသွားအလာအကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်များစွမ်းဆောင်ရည်မက်ထရစ်အပေါ်သက်သက်သာလုပ်ကြသည်ဆိုလိုတာကလုံးဝ CDN-Agnostic ဖြစ်ပါတယ်" ကျနော်တို့ကသူတို့ဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏နေရာတိုင်းမှာပိုပြီးစိတ်ချလက်ချကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကယ်နှုတ်တော်မူ။ ရန်ထုတ်လွှင့်နဲ့ content provider များကို enable "။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပရိသတ်တွေအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအတွေ့အကြုံအရလိမ့်မယ်နြိုငျကိုဆိုလိုသည်။ "
Verizon က Smartplay ကြော်ငြာ INSERT ကိုပိုကောင်းစေ
အသွားအလာလမ်းကြောင်းပြောင်းနေသည်အပြင်, Verizon က Smartplay လည်းအမှားအယွင်းများ, ကုန်ဆုံးချိန်နှင့်ခြေရာခံပြဿနာများကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည့်ကြော်ငြာသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ထဲသို့အဆုံးမှအဆုံးသို့မြင်ကွင်းရာပူဇော်သက္ကာကိုတစ်ဦးပိုမိုကြော်ငြာဆာဗာဘာဂ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တုံ့ပြန်မှုကြိမ်နှင့်ကုန်ဆုံးချိန် Third-party ကြော်ငြာဆာဗာများမှနှင့်ဆယ်ကျော်ရက်ပေါင်းတဲ့ကာလများအတွက်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြည့်စုံ session တစ်ခု-Level ဒေတာများပါဝင်သည်အရာတိုင်းကြော်ငြာငွေပေးငွေယူ, ဒေတာစုဆောင်းစတိုးဆိုင်မှအလုပ်ဖြစ်တယ် debuf ကြော်ငြာဆာဗာနှင့်အတူ။
သူကပြောပါတယ်သည့်အခါ Sidi ထပ်မံကြော်ငြာ server ကိုဒီဘာဂ်၏အသုံးပြုမှုအပေါ်အသေးစိတ်ရှင်းလင်း "လူငယ်ကဏ္ဍနဲ့ content ဖန်တီးသူတိုင်းကြည့်ရှုသူအဘို့ကိုယ်ပိုင်စီးမကယ်မလွှတ်နိုင်စွမ်းရှိပေမယ့်, ယခုတိုင်အောင်, စိတ်စိတ်အမွှာမွှာနှင့် OTT ကြော်ငြာန်းကျင်စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့်ခက်ခဲအမှန်တကယ်အတွင်းကြော်ငြာထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းအပေါ်င့်အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှုမြင်ရဖို့စေပြီ။ ကြော်ငြာဆာဗာဘာဂ်ကြော်ငြာတွေကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကြည့်ရှုသန်းပေါင်းများစွာတို့အတွက်အတွေ့အကြုံ၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်ဝန်ဆောင်မှုပေးဖွင့်, ကယ်နှုတ်တော်မူ၏မည်သို့သို့ဝေး သာ. ကြီးမြတ်င့်လင်းမြင်သာခြင်းနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ပို့ခြင်းဖြင့်ဒီပြောင်းလဲစေပါသည်။ "
Verizon က Smartplay နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဗီဒီယိုလွှ
Verizon က Smartplay အကြောင်းအရာအသုံးချခြင်းမှုကိုထငျရှားစခြယ်လှယ်နည်းပညာကနေတဆင့်ဖြစ်ကြောင်း Ultra-ကိုယ်ပိုင်ဗွီဒီယို streams ကယ်တင်တတ်၏။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများတစ် viewer ရဲ့တည်နေရာသို့မဟုတ် device ကိုအမျိုးအစားပေါ်အခြေခံသည်ဆိုအကြောင်းအရာများကန့်သတ်ရန်အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးရန်လိုအပ်သောကြောင့်, ထုတ်လွှင့်မဟုတ်ဘဲပရိသတ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အလို့ငှာကြည့်ရှု၏ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်များတဲ့ငြိမ် slate မက်ဆေ့ခ်ျကိုထက်အကြောင်းအရာကအခြားရွေးချယ်စရာမကယ်မလွှတ်ရပေမည်။ ရိုးရှင်းသော UI ကိုအတွင်းမှာပဲဖောက်သည်ရှေ့ဆက်အချိန်တတ်နိုင် t0 အချိန်ဇယားကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများဖြစ်ကြပြီးပိုကောင်းတဲ့ထိန်းချုပ်မှုကြည့်ရှုသူအတှေ့အကွုံမှစိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာ၏ဖြန့်ဖြူးစီစဉ်ထားသည်။ ဖောက်သည်များ, ပရိသတ်တွေဖန်တီး rulesets တည်ဆောက်, ပြီးတော့အရေးပါသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဤစံနှုန်းများလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အမွေထုတ်လွှင့် Workflows တိုးချဲ့ဖို့, content တွေကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်ပရိသတ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အားစီစဉ်ခြင်းနှင့်သတိပေးချက် Interface (ESNI) ကို အသုံးပြု. မဆိုလုပ်ငန်းအသွားအလာအဘို့အလိုအလြောကျနိုင်ပါသည်။ အတွက် configuration process ကိုအောက်ပါ, Verizon က Smartplay အကြောင်းအရာ Target ကသူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းများအတွက်အထူးအနေနဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုကယ်နှုတ်တော်မူရန်အလို့ငှာတစ်ဦး viewer ရဲ့တည်နေရာ, ကိရိယာသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်တို့ကိုသိတော်မူ၏။
Verizon က Smartplay ပြီးတော့ OTT
OTT personalization ဆွေးနွေးခြင်းအခါ, Sidi ကြောင်းဖော်ပြထား "OTT personalization တိုင်းအသုံးပြုသူများအတွက်အကြောင်းအရာ, ကြော်ငြာတွေနဲ့ပြန်ဖွင့်ရန်ညွှန်ကြားချက်တစ်မူထူးခြားတဲ့သီချင်းစာရင်းကို generate နိုင်ရန်အတွက်မန်နီးဖက်စ် server ပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ သငျသညျမသက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုသည်မည်မျှကြည့်ရှု၏, သင်အကြောင်းအရာ personalize နှင့်ဒေသခံအကြောင်းအရာအခွင့်အရေးများကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်သေချာဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် "ဟု Sidi ကဆိုသည်။ "Smartplay ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာ့အထဲတွင်ကစားတိုက်တွန်းသောကြည့်ရှုသူအဘို့, တိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်အားဖြည့်ဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေနဲ့ rulesets တည်ဆောက်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုပါတယ်။ "
အကြောင်းပိုသိချင်တယ်ဆိုရင် Verizon ကမီဒီယာ နှင့် Verizon က Smartplayထို့နောက်ထုတ်စစ်ဆေး www.verizonmedia.com.
MacOS အတွက် ATTO Disk Benchmark ရောက်လာပြီ - အောက်တိုဘာလ 16, 2019
Show ကိုနယူး YorkUnveils Podcasts စီးရီးများနှင့်သီးသန့် Podcasts Sessions NAB - အောက်တိုဘာလ 13, 2019
Clear ကို-Com / FreeSpeak Edge တင်ပြ NAB Show ကို New York မြို့မှာပွဲဦးထွက်တော်မူမည် - အောက်တိုဘာလ 5, 2019
ကြော်ငြာ INSERT ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အကြောင်းအရာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor အရည်အသွေးမြင့်မားသောအကြောင်းအရာများကို OTT လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC အသွားအလာ TVU ကွန်ယက် Verizon က Verizon ကမီဒီယာ Verizon ကစမတ် Play စ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-09-27
ယခင်: ကင်မရာအော်ပရေတာ / ထုတ်လုပ်ခြင်းလက်ထောက်
နောက်တစ်ခု: DaVinci ခုနှစ်တွင်တညျ့ "Sneaky Pete" အရောင်စတူဒီယိုဖြေရှင်း